'बायाँ मिर्गौला झिकेर बायाँतर्फ नै जोड्यौं'- भिडियो - कान्तिपुर समाचार
'बायाँ मिर्गौला झिकेर बायाँतर्फ नै जोड्यौं'
फाल्गुन २१, २०७६ स्वरूप आचार्य
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बुधबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा लगभग साढे चार घण्टा लगाएर सफलतापूर्वक दोस्रो मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको छ । उक्त प्रत्यारोपणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका मिर्गौला प्रत्यारोपण विशेषज्ञ प्रा.डा. प्रेम ज्ञवालीसँग गरिएको विशेष अन्तरवार्ता :
प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रत्यारोपण शल्यक्रिया कति बजेबाट सुरु भयो र कति घण्टा लाग्यो सम्पूर्ण कार्य सक्न?
हामीले उहाँलाई १०, सवा १० बजेको हाराहारी शल्यक्रिया कक्ष भित्र लगेका थियौं। शल्यक्रिया साढे १० बजे सुरु गर्‍यौं। दुईटा शल्यक्रिया ‘साइड बाइ साइड’ गरिएको थियो। सम्पूर्ण प्रक्रिया सकिँदा साढे चार घण्टा लाग्यो।
तपाईंहरुले दाताबाट मिर्गौला कसरी झिक्नुभयो?
हामीले दाताको ल्याप्रोस्कोपिक विधिबाट शल्यक्रिया गरेर मिर्गौला झिकेका हौं। त्यसो गर्दा दाताको रिकभरी समयको छोटो र सहज हुन्छ। हामीले यहाँ दाताबाट मिर्गौला झिक्दा ल्याप्रोस्कोपिक विधि नै प्रयोग गर्न थालेका छौं। यो विधिबाट दाताको शल्यक्रिया गरिएको उहाँ ३३/३४ औं हो। पहिला हामीले ठूलै घाउ बनाएर गथ्यौं। तर अहिले हामीले त्यो सिप पनि सिक्यौं र प्रविधि पनि उपलब्ध भएकोले त्यो नै प्रयोग गर्छौं।
प्रत्यारोपणका लागि दाताको कुन मिर्गौला तपाईंहरुले झिक्नुभयो?
हामीले बायाँतर्फको मिर्गौला झिकेका हौं।
बायाँ मिर्गौला नै चयन गर्नुको कुनै मुख्य कारण?
दाताको प्राय गरेर बायाँ मिर्गौला नै झिक्ने गरिन्छ। किनभने मिर्गौलामा मुटुबाट अक्सिजनयुक्त रगत लैजाने मुख्य नसा (रेनल आर्टरी) तथा मिर्गौलाले छानेको रगतलाई फोक्सोमा लिएर जाने नसा (रेनल भेन)को लम्बाई केही लामो हुने भएकाले पनि प्रत्यारोपणमा सहज हुन्छ। सामान्य भाषामा भन्दा निकालेर जोड्न सहज हुन्छ। अर्को कुरा यदि दाताको दायाँभन्दा बायाँ मिर्गौला प्रविधिक रुपमा राम्रो छ भने दायाँ मिर्गौला निकाल्छौं, बायाँ निकाल्दैनौं।
प्रधानमन्त्रीज्यूमा प्रत्यारोपित मिर्गौला कतातर्फ राखियो?
उहाँको पहिलो प्रत्यारोपण गर्दा दायाँतर्फ मिर्गौला राखिएको थियो। त्यसैले हामीले अहिले बायाँतर्फ मिर्गौला राखेका छौं। प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७६ २२:०२
शिक्षण अस्पतालमा गरिएको कतिऔं दोस्रो प्रत्यारोपण हो?
हामी कहाँ दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यू नवौं व्यक्ति हो। उहाँ भन्दा अघि हामीले ८ जनाको सफलतापूर्वक दोस्रो प्रत्यारोपण गरेका थियौं। हालसम्म सबैको अवस्था राम्रो नै रहेको छ।
उहाँको पहिलो प्रत्यारोपण गर्दा दायाँतर्फ मिर्गौला राखिएको थियो। त्यसैले हामीले अहिले बायाँतर्फ मिर्गौला राखेका छौं।
शल्यक्रियापछि प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ?
उहाँको अवस्था अहिले सामान्य छ। होस आइसकेको छ। कुरा गर्नसक्नु हुन्छ। तर हामीले उहाँलाई आराम गर्न दिनका लागि कुनै कुराकानी गरेका छैनौं। उहाँ चिकित्सकहरुको निगरानीमा हुनुहुन्छ। उहाँको सबै भाइटल्सहरु ठिक छ। प्रेसर, अक्सिजनको मात्रा सबै ठिक छ। साथै प्रत्यारोपित मिर्गौलाबाट पिसाब पनि भइरहेको छ। अहिले पौने ८ बजेसम्ममा २ देखि ढाई लिटरसम्म पिसाब आइसकेको हुनुपर्छ। मैले हेर्न भने पाएको छैन।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा यही रफ्तारमा सुधार भयो भने कति दिनमा डिस्चार्ज हुनसक्नुहुन्छ?
सबै कुरा सामान्य रहेर यही रफ्तारमा रिकभरी भयो बिचमा केही जटिलताहरु आएन भने हामी उहाँलाई आइतबार/सोमबारसम्ममा नै डिस्चार्ज गर्न सक्छौं।
दातालाई कति दिन पछि डिस्चार्ज गर्नुहुन्छ?
दाताको अवस्था पनि सामान्य रहे हामी शनिबार/आइतबार डिस्चार्ज गर्छौं।
दोस्रो प्रत्यारोपण गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रज्यूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के–के हुन्?
मिर्गौला प्रत्यारोपण पहिलोपटक भए पनि दोस्रो पटक भएपनि त्यस्तो बिरामीले मुख्य गरेर संक्रमणहरुबाट जोगिनुपर्छ। संक्रमण भनेको फोहर कुरा चलाएर मात्र हुँदैन, मान्छेहरुको भिडबाट, स्वासबाट पनि हुनसक्छ। उहाँले कुनैपनि प्रकारको संक्रमण निम्त्याउनुभएन।
मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दा दुईजनाको लगभग एकैसाथ शल्यक्रिया भइरहेको हुन्छ। तपाईंहरुको टिमको कुन सदस्यले कतातिरको शल्यक्रिया गर्नुभयो भन्न मिल्छ?
त्यो सबै टिम वर्क हो। दुईटा टिम बनाएर काम गरेका थियौं। म चाहिँ प्रधानमन्त्री तिर थिएँ। अर्को टिम चाँही दाता तिर थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यारोपणमा संलग्न चिकित्सकीय टोली ।
भारतबाट आउनुभएका विशेषज्ञ डा. अनन्त कुमारको भूमिका यो प्रत्यारोपणमा के थियो?
प्रत्योपणमा उहाँको भूमिका थियो। सरकार प्रमुखको प्रत्यारोपण भएकोले गर्दा हामी सबैजना प्रेसरमा थियौं। प्रधानमन्त्रीको शल्यक्रिया भनेपछि मिडिया, जनता र आफ्नै सहकर्मीहरुबाट पनि प्रेसर हुन्छ। सबैले शुभकामना, शुभकामना भन्दा झनै प्रेसर हुन्छ। त्यसैले हामीले उहाँलाई आवश्यक परिहाल्यो भने सहयोग गर्नका लागि बोलाएका थियौं। किनभने उहाँले प्रधानमन्त्रीज्यूको पहिलो प्रत्यारोपण पनि गर्नुभएको थियो। उहाँ त्यसैले दाताबाट मिर्गौला झिक्ने र प्रत्यारोपण गर्ने दुवै कार्यमा सरिक हुनुहुन्थ्यो। भनाइको मतलब ‘स्क्रब’ (शल्यक्रिया गर्नका लागि तयारी अवस्था) मै हुनुहन्थ्यो। तर, मुख्य रुपमा भने सबै काम हाम्रो डिपार्टमेन्ट कै साथीहरुले गर्नुभएको हो।
डा. अनन्त कुमारसँग अरु पनि चिकित्सकहरु आउनुभएको छ कि उहाँ एक्लै हो?
उहाँसँग एकजना मिर्गौला रोग र एकजना संक्रमणरोग विशेषज्ञ पनि आउनुभएको छ। उहाँहरुले पनि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थालाई नजिकबाट हेरिरहनुभएको छ। कुनैबेला उहाँहरुको सहयोग चाहियो भने परामर्श लिन्छौं। हामीलाई शल्यक्रिया गर्दा जति प्रेसर थियो त्यति नै प्रेसर अब मिर्गौला रोग विशेषज्ञहरुलाई पनि छ।
प्रत्यारोपण गर्दा तपाईंहरुलाई सबैभन्दा ठूलो डर के थियो?
हामीले प्रत्यारोपण गरेको मिर्गौलामा रक्तसञ्चार भइसकेपछि त्यसले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने थियो। अहिले पूर्ण रुपमा काम गरेर पछि त्यो बन्द पनि हुनसक्छ। तर अहिलेलाई भने त्यो डर हटेको छ। बिहानीले दिन कस्तो हुन्छ भन्ने संकेत गर्छ भने झैं सबै राम्रो हुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं।
तपाईंहरुलाई दाताबाट झिकिएको मिर्गौला प्रधानमन्त्रीको शरिरमा जोड्न कति समय लाग्यो?
हामीले मुख्य नसाहरु (आर्टरी र भेन) जोड्ने काम ३९ मिनेटमा सक्यौं। त्यसपछिको कार्य भनेको सयम लिएर गर्न मिल्ने कुरा हो।
प्रधानमन्त्रीले नेपालमा नेपाली चिकित्सकहरुबाटै दोस्रो प्रत्यारोपण गराउँदा तपाईंहरुको हौसला त बढेको होला नि?
हो, अवश्य नै हामी सबैमा नयाँ उत्साह थपेको छ। हामी यहाँ पहिलो प्रत्यारोपण हुँदा जति खुशी थियौं, अहिले पनि त्यति नै खुशी छौं।
प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७६ २१:४७